Xasan Sheekh iyo CC Warsame oo la qorsheeyay in la khaariyiyo | KEYDMEDIA ENGLISH
Xasan Sheekh iyo CC Warsame oo la qorsheeyay in la khaariyiyo
General Indhacadde, oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in hoggaanka qaar ka mid ah laamaha ammaanka ay qorsheeyeen khaarijinta siyaasiyiin caan ah iyaga oo kaashanaya Al-Shabaab.
MUQDISHO, Soomaaliya – General Yuusuf Maxamed Siyaad [Indhacadde], oo ka mid ah shaqsiyaadka aadka ugu dhuun duleela amniga, ayaa sheegay in ay soo gaareen, xogo sirdoon oo sheegaya in la qorsheeyay khaarijinta, Madaxweynihi hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame.
General Indhacadde, oo wareysi siiyay idaacadda maxalliga ah ee Kulmiye, ayaa sheegay, in wada-shaqeynta Al-Shabaab iyo hoggaanka laamaha amniga ee Dowladda Federaalka ay sababtay in labada dhinac iska kaashadaan khaarijinta dadka ka aragtida duwan Farmaajo iyo kuwa uu uga cabsanayo in ay xilka Madaxweynaha ka beddelaan.
Wuxuu xusay in labada askari, ee Arbacadii weerartay Garoonka diyaaradaha Muqisho, ay wateen aqoonsi hay’ad amni, isla-markaana labo maalin ka hor la siiyay aqoonsiga lana geeyay goobta ay ka dagaallameen, isagoo sheegay in maalmaha soo socda la beegsan doono siyaasiyiin iyo shacab kala duwan si loo qalqal galiyo doorashooyinka.
Indhacadde, wuxuu sheegay in sababta loo dilay AUN, Xildhibaan Aamino Maxamed, ay tahay in la aamusiyo, lana duugo kiiskii Ikraan Tahliil, isagoo isku xiray dhamaan dilkii Cabdicasiis Afrika, weerarkii garoonka diyaaradaha, kiiska Ikraan, dilkii Injineer Yariisow iyo dhacdooyin kale oo sida uu xusay ay masuul ka yihiin hay’adaha amniga.
“Xildhibaan Aamino cidda disahay waa iska caddahay, waad ogeyd inta ay hadlaysay oo ay dabajoogtay kiiska Ikraan iyo shaqsiyaadka ay ka hadleysay, kuwaas qaarkood waa Al-Shabaab waa ku aqaannaa, in ay la shaqeeyaan ayaan ku aqaan, in ay yihiin ayaan ku aqaan, in ay hadda ka shaqeynayaan gumaad ayaan ogahay” ayuu yiri Indhacadde.
General Yuusuf Maxamed Siyaad, wuxuu xaqiijiyay inuu hayo xogo la xariira in todobaadkaan, la diyaariyay qaraxyo waaweyn oo meelo kala duwan gilgili doona, wuxuuna ku baaqay in la muujiyo feejignaan dheeri ah, isagoo si gaar ah ugu digay MW Xasan Sheekh Maxamuud iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame.
Labo maalin ka hor, Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir, wuxuu sheegay in ay soo gaarayeen digniino amni oo isi soo tarayey oo ku aaddan amnigiisa shakhsiga ah iyo in la qorsheynayo weeraro lagu qalqal gelinayo, halka Madaxweynihii hore, Xasan Sheekh, uu habeen ka hor sheegay in AUN, Xildhibaan Aamino, lagu dilay shirqool siyaasadeed.
Aalaaba, xilliyada doorashada iyo bisha ramadaan, ayay si weyn Al-Shabaab u laba jibbaaraan, falalka amni darro, xaalka aayaana ka sii darnaan kara sidii hore, maadaama Kooxda waqtigu ka dhamaaday ee Madaxtooyada deggan, si cad ugu bareereen ka aarsiga, ka cad-goosiga iyo kala adkaanshaha iyaga oo adeegsana Al-Shabaab.